Ukubhoda eklasini eyimfihlo! I-Thor Schrock Trouces yokuThengisa nge-Intanethi iGurus
I-Thor Schrock ithengisa ukuthengisa nge-Intanethi iGurus? Ukunika i-1,800 yeeRandi kwi-Cash kunye namaBhaso
NgoMgqibelo, Disemba 8, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 UTr Schrock
Funda de kube sekupheleni ukufumana ithuba lokuphumelela i-CASH eyi-1,000 XNUMX!
UDoug kwaye uninzi lwenu lundixhasa kwi-Next Internet Millionaire show show, kwaye nangona bendiyimbaleki yesibini bendinethuba elihle lokufunda kolunye urhwebo olumangalisayo lwe-intanethi kwi Igumbi lokufundela eliyimfihlo.
Kwaye ndandingumfundi olungileyo KAKHULU. Kulungile enyanisweni ukuba ndithatha ababini endandifundise ukuba ngabafundisi abakhulu, uMarlon Sanders noArmand Morin baya ehlathini eliseJoel Comm's Inkqubo yokuDibanisa iklasi eyimfihlo!
Nantsi into endiyifundileyo kunye nendlela endibetha ngayo ezinye zeentengiso ze-intanethi ezilungileyo kwihlabathi.
Yiba yiNinja yokuThengisa, hayi i-Thug yokuThengisa.
UMarlon Sanders undifundise ithiyori emva kwento endiyaziyo ukuba mandithini ngaphambili. Uthe onke amandla anobuthathaka obuhamba nawo. Ukuba ulwa nomncintiswano ophezulu, akufanele uhlasele amandla abo. Ufuna ukuhlasela ubuthathaka obuhamba namandla abo.
Umzekelo, ukuba unyuka nxamnye ne-Best Buy uzama ukuthengisa iikhompyuter, sukuvula ivenkile enkulu enabasebenzi abathengisayo abanesakhono sokuxhasa kunye nenkxaso kunye nokukhetha okukhulu kweePC.
Endaweni yokuthengisa iikhompyuter ezikumgangatho ophezulu ezilungiselelwe iimfuno zomsebenzisi kwaye zibonelela ngenkonzo yokuphumelela amabhaso kunye nesicwangciso senkxaso yokuyibuyisela. Ngokuhlasela ubuthathaka ngokwamandla abo, uyilahla eyona njongo ikhuphisanayo yokuthenga okungcono.
Okukhona usophukile Ngcono ukuba kufuneka ube neMfanekiselo
IiSayithi ezinje ngeAmazon, okanye uGoogle, okanye uYouTube ziiwebhusayithi ezizizigidi zeedola ezineelogo ezaziwa ziindwendwe kwaye abantu baye babathemba.
U-Armand Morin undicacisele ukuba akukho ngozi kwinyani yokuba unokuzibona ngamehlo iilogo zenkampani nganye kwezi zingasentla engqondweni yakho ngoku.
Ngenxa yoko xa enye yezi webhusayithi ifuna ukuba uthathe inyathelo, nokuba uyayithenga incwadi okanye ulayishe ividiyo, kunokwenzeka ukuba uthathe elo nyathelo kuba uyathemba ukuba uyalithemba igama kunye nelogo.
Iindleko ezinkulu ozenzayo kwishishini kukufumana umthengi okokuqala. Ukuthengisa okwesibini kumthengi ofanayo kufanele ukuba kube kukuhamba ngekhekhe ukuba uphawule ngokufanelekileyo kwaye umthengi wakho uyakuqonda kwixesha elizayo xa unkqonkqoza.
Ukuba umfanekiso unamagama ali-1,000 XNUMX, yintoni eyiVidiyo efanelekileyo?
Sebenzisa ividiyo ukuqhuba ukugcwala kwiwebhusayithi yakho yindlela yobugcisa, kwaye ukuba uyayiqonda uya kuba nesixhobo esisebenzayo kakhulu esingakhathalelwanga ngabantu abaninzi.
Nabani na onokuthumela i-backlink kwimizuzwana embalwa. Akukho nto inkulu ukungena kuKhangelo lukaGoogle. Kodwa ukuthatha ividiyo kuthatha ixesha kunye netalente ethile. Uninzi lwabantu aluyazi indlela yokuqhuba iividiyo, ngenxa yoko abayiphazamisi kwaphela.
UMike Koenigs uMike undifundise indlela yokuvelisa ividiyo, ukuyifumana phambi kweebhokhwe zamehlo, emva koko ufumane ezo mbono zamehlo kwiwebhusayithi. Undifundise ukusebenzisa iividiyo ukuqhuba ukugcwala kwabantu njengenjini yokukhangela, kwaye eli yayilicandelo elikhulu elandishukumisela ngaphezulu kwabanye abathengisi abakhulu.
Ucacisile ukuba abantu baya kuyinyamezela ividiyo embi ukuya kwinqanaba, kodwa ukuba isandi sakho sibi, awuyi kudlula kwimizuzwana emibini yokuqala. Ukuba uza kuchitha imali kwizixhobo, thenga imakrofoni elungileyo kuqala, emva koko ufumane ikhamera elungileyo.
Kwaye kukho iidola ezingama-30 ezimele ukuba nezibane onokuzenza kwizinto eziseDepho yasekhaya eya kuthi ikhanyise iseti yevidiyo yakho yonke. Olunye ulwazi olothusayo oluya kwenza iividiyo zakho zibonakale zintle kwaye zikunike umda kunabanye abambalwa abaphosa iividiyo kwi-intanethi.
Umsila omde ngowona Mhlobo oBalaseleyo weTrafikhi
UDave Taylor ucacisile ukuba ukuba uyakha ngokufanelekileyo iposti enomxholo abantu abafuna, uya kuvuna inani elincinci lezithuthi kweso sithuba ngokungenammiselo kwixesha elizayo njengoko abantu befuna oko bakufunayo.
Okwangoku indlela ende yomsila wokubhloga iya kuvelisa uninzi lweetrafikhi ezincinci ezongeza kubukho bewebhu obunamandla.
Unokukhangela malunga nayo nayiphi na into ekwi-Intanethi kwaye ufumane elinye lamaphepha kaDave Taylor kwenye indawo kwiziphumo.
I-Symphony yeGugu Ukukhaba
Endaweni yokuba ndithathe kuphela inkqubo ye-guru enye, ndadibanisa iindlela ezininzi ezivela kwigumbi lokufundela eliyimfihlo ukwenza umatshini wentengiso owawunamandla ngaphezu kwabo bonke abafundisi bam ngokwabo.
Ndiqale ngewebhusayithi ezintathu zonke eziyilelwe ukukhuthaza imveliso enye. Ezinye iisayithi zithetha amathuba amaninzi okubanga amabala kwiziphumo zokukhangela ezili-10 kunye nokunyanzela ezinye iisayithi ezantsi.
Ndihambile ngokukhawuleza ukufumana iisayithi zam zalungiswa ngaphambi kokumiliselwa kwangaphambili, kwaye www.nextinternetmillionairedvd.com yayiyindawo yam yewebhu ephambili.
Ukulandela ingcebiso kaMarlon, kuye kwafuneka ndihlasele ubuthathaka kwiJuggernaut eyimfihlo yeKlasi yokuFunda. Endaweni yokudlala ngokufanayo, ndibeka ikuki kwikhompyuter yakho? Umdlalo wokudlulisela, uhlasele igumbi lokufundela eliyimfihlo ngexabiso ngokunikezela ngesaphulelo.
UJoel unikezela ikhomishini yokubambisana eyi- $ 200 kuyo yonke into endiyithengisayo eklasini eyimfihlo, ke ndinike isaphulelo se- $ 100 kuye nakubani na othenga kwiiwebhusayithi zam. Ndithetha ngokunyanisekileyo, ukuba ubucwangcisa ukuthenga iseti, kutheni ungagcini i- $ 100, akunjalo?
Ngokukhawuleza ukuba ndifunde ukuba igama leDVD liza kuba yiClassroom eyimfihlo, ndisebenzise iindlela ezisisiseko zeSEO / SEM ukubamba indawo eyi- # kuGoogle kwindawo yam elandelayointernetmillionairedvd.com iwebhusayithi.
Emva koko ndaqesha ikhowudi ukuba indenzele ifomu yokungenisa i-imeyile eyayindivumela ukuba ndiqokelele amagama kunye needilesi ze-imeyile kwiiwebhusayithi ndizigcine kwindawo yogcino lwedatha. Ndikwazile ukuqokelela ngaphezulu kwe-170 izikhokelo zabantu ababenomdla kwisaphulelo.
Ndaye emva koko ndenza iividiyo ezili-12 zeSechool Classroom zeesampulu (1 kumhlohli ngamnye) ezenziwe kwividiyo ekhutshelweyo nakwisandi kwiziqendu ezilandelayo ze-Intanethi zeMilionea. Ndisebenzise ubuchule bukaMike ukubhala izihloko, iinkcazo, ii-URL kunye nemiyalezo engezantsi yesithathu eya kwenza. Ndizilayishe ezo kwindawo nganye yokwabelana ngevidiyo kwiplanethi yomhlaba.
Ndaye ndagcina phantse onke amabala aphezulu kuGoogle, Yahoo, kunye nasekukhangekeni kwevidiyo ye-Youtube yeklasi yeklasi eyimfihlo. Emva koko, yayilixesha lokuhlasela iBlog Search.
Ndiqale ukuthumela kwibhlog yam amaxesha amaninzi ngemini ndisebenzisa ingcebiso ende yomsila kaDave Taylor. Ngelixa ukhuphiswano lwam lwaludlala iimfazwe zecookie ukuqhuba ukugcwala ngokusebenzisa amakhonkco abo, ndandibutha iidilesi ze-imeyile kunye nokwakha ubudlelwane.
Emva koko ngo-Disemba 5 uJoel wakhupha. Ndathumela nge-imeyile uluhlu lwam, ndapapasha iposti yebhlog, ndabeka intengiso yeGoogle Adwords, kwaye ndilayishe amaphepha am okwazisa emva kokumiselwa.
Xa uthuli luzinzile, bendililungu likaJoel # 1 emva komhla woku-1. Bendiphuma phambi kukaMarlon Sanders kunye noArmand Morin? oyena gurus undifundise kwigumbi lokufundela eliyimfihlo. Basenokuqhubeka nokuhlangana ukuze bandibambe, kodwa kulapho isigaba 2 singena khona!
Ndidinga ukuba undincede ndiwugqibe umsebenzi kwaye ungqine ukuba isixa semfundiso yaseKlasini eyimfihlo sinamandla ngakumbi kuneseshoni nganye.
Ndibaleka a ukhuphiswano kwibhlog yam ngaphezulu kwe- $ 1,800 ezinkozo kunye namabhaso phezulu ukubamba. Konke okufuneka ukwenze ukuze ube nokuphumelela ekuphumeleleni kukwenza iposti, wenze amagqabantshintshi, kwaye ungeze ikhonkco le-blogroll.
Jonga ukhuphiswano kwaye undazise ukuba ucinga ntoni. Ndiza kugcina uDoug eposwe ngendlela endenza ngayo, kodwa injongo yam kukugqiba umsebenzi endiwuqale eColorado ngo-Agasti, kwaye ngeli xesha ndicinga ukuba uJoel uyakuqaphela.
Phantsi kobunkokheli bukaThor, iSchrock Innovations Computer Company ivotelwe njengenombolo # 1 yenkampani ezimeleyo yokulungisa iikhompyuter minyaka le ukusukela ngo-2001 kwimarike ekhuphisana nayo. UTr wakhula iSchrock Innovations ukusuka elunxwemeni lokungabinamali ngo-2004 ukuya kwi- $ 1.5 yezigidi ngonyaka amandla endlu yenkonzo ngo-2009 eneendawo e-Omaha naseLincoln, NE.
Ndiyibeka phi iBhlog yam?
Juni 26, 2008 ngo-12: 27 AM
$ 200.00? Ngaba ibingafani neseti ye-1500 yeedola kwaye ubungekho kumdlalo ngokwawo? Yhu.